Quel maquillage pour yeux bleu gris - Passion Makeup
Accueil Yeux Quel maquillage pour yeux bleu gris
Quelle couleur de maquillage yeux bleus ?
Gamuchira zvigadzirwa zvepanyama mukati mezuva. Sarudza maziso ako emumvuri kubva kubhuruu, khaki, plum kana nhema. Kune rimwe divi, usashandise toni dzinodziya uye pfumbu, ivo vanodzima iwo anotaridzika.
Brown ndiyo yakawanda, inomiririra 80% yehuwandu hwepasi rose. 8 kusvika 10% inozobatwa nemaziso ebhuruu, 5% maziso ehazel uye 2% maziso egirini, ayo ari iwo mashoma.
Chiregera ! Kuti ujekese maziso ako machena uye kujeka kwako, tendeukira kune anodziya mavara senge blonde, kana mhangura kana goridhe shava, asiwo huchi blonde. Kune rumwe ruvara rwakaratidzwa, sarudza goridhe kana yeVenetian tsvuku. Asi zvachose dzivirira mimvuri yakasviba zvakanyanya.
Grey Eyes Kunyange zvakadaro, kana iwe uchida kuisa kamuvara kadiki kumeso ako, mimvuri yakadai seplamu, khaki kana yepepuru yakanakira kusimbisa, kujekesa nekusimbisa kutaridzika kwemaziso akachena.
Kune eyeshadows, maziso ebhuruu anogona kutenga ese anodziya uye anotonhorera matoni: kubva kune epasi brown, caramel, bronze, beige, pichisi, apricot mimvuri kune mavara epingi, violet nekorari anomutsa iris mune imwe. Wink!
Kana iwe uine maziso ebhuruu, iwo mavara anozoita kuti maziso ako abude zvakanyanya anozoita orenji, kana toni dzakabatana sedzemhangura kana goridhe. Iyo yakasviba mimvuri iwe yaunoshandisa, iyo yakanyanya musiyano iwe yaunogadzira uye inosimbisa yako eye eye ruvara.
Bhuruu ndiyo yegoridhe chiyero chemaziso akareruka. Green uye grey zvakasiyana. Zvekugadzira izvo zvinorerutsa bhuruu uye mwenje maziso mune zvese, zvese zviri nezve sarudzo yemavara. Kusarudza toni dzekuwedzera pamwe nemuvara weziso kwakakosha kusimudzira kutaridzika.
Kana ruvara ruchada kuyera pasi maziso ebhuruu uye nekudaro kutaridzika kwako, iro rebhuruu. Kana iwe uchinyatsoda bhuruu eyeshadow, enda kune ebhuruu ayo ari akanyanya kuchena kana epepuru kana mauve. Uyezve dzivisa, kana zvichibvira, iro girini risingabvumirane nemaziso ebhuruu.
Article précédentQuel rouge à lèvre pour une rousse
Article suivantQuel fond de teint après 60 ans